Isamsung iveze idatha eyimfihlo yeeprojekthi ezininzi eziphambili | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ngokomphandi wezokhuseleko, uMossab Hussein, Isamsung yayivuza idatha ethe-ethe, ezinje ngeziqinisekiso, iikhowudi zomthombo kunye nezitshixo zemfihlo, kwiiprojekthi ezahlukeneyo ezibalulekileyo.
Engazi, inkampani inike "eluntwini" ukufikelela kwiifayile ezibalulekileyo kwilebhu yakho yophuhliso kwiGitLab, ezingakhuselwanga ngegama eligqithisiweyo.
Idatha eveziweyo iqulethe iziqinisekiso zeakhawunti yeenkonzo zewebhu zeAmazon ezazisetyenziselwa uphuhliso lweenkonzo zeSamsung. Oku kongeza kutyhila i-100 S3 yokugcina eqhotyoshelwe kwiakhawunti efanayo ye-AWS enedatha ye-log kunye ne-analytics
Iithokheni zokufikelela kubasebenzi zeGitLab zikwayinxalenye yedatha ebuthathaka eyafunyanwa. Umphandi wezokhuseleko ufumene ukufikelela kwiiprojekthi zoluntu nezabucala ngeethokheni zokufikelela, enyusa inani leeprojekti ezisuswayo ukusuka kuma-43 ukuya kwangama-135. Hussein.
Uninzi lweefayile ezibonwa esidlangalaleni eziqulethweyo idatha enxulumene ne-Samsung's SmartThings kunye neenkonzo zeBixby. Isenokuba "yintlekele" ukuba umdlali othile olungileyo usebenzise ikhowudi.
Isamsung ibamba iiprojekthi ezininzi kwiVandev Lab, Indawo yokugcina inkampani yeGitLab ngeenjongo zophuhliso. Indawo efanayo ineprojekthi ezinjengeqonga leSmartThings kunye neenkonzo zeBixby.
Isamsung iveza inzwa yayo entsha efikelela kuma-64MP
Nangona kunjalo, Isamsung ngoku irhoxise ukufikelela kuzo zonke izitshixo kunye neempawu kwiqonga lovavanyo. Inkampani iphanda ukufumana ubungqina bayo nakuphi na ukufikelela kwangaphandle emva kwalo msitho.
Emva kokuba konke oku kufunyenwe, ifemi iya kusebenzisa amanyathelo okhuseleko omeleleyo kuzo zonke iilebhu zayo, ngokucacileyo, nakwamanye amacandelo avulelekileyo kubaphulaphuli abohlukeneyo, ngenjongo yokuba into efanayo ayiphinde yenzeke kwakhona.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Isamsung iveze idatha ethe-ethe, iziqinisekiso kunye neekhowudi zemithombo yeeprojekthi ezininzi eziphambili